Infographics and Video: Nnyocha Omume Nchọgharị Ntanetị | Martech Zone
Infographics na Video: Nyocha Omume Ntanetị
Monday, April 15, 2013 Monday, April 15, 2013 Douglas Karr
iAcquire duziri ọmụmụ ụzọ atọ na etu ndị mmadụ si akpa agwa na ntanetị - wepụta ihe ọmụma maka omume ọchụchọ, omume mkpanaka na omume mgbasa ozi. Enwere ike ịhụ nsonaazụ zuru ezu na vidiyo vidiyo a:
iAcquire partnered na SurveyMonkey ege ntị maka ọmụmụ ihe nke na-enye anyị nghọta dị omimi banyere usoro ọchụchọ.
Site na ngwaọrụ mkpanaka bụrụ ihe ndabere na ndụ ndị mmadụ, iAcquire chọrọ ichota ụfọdụ nghọta banyere otu ndị mmadụ si eji ngwa ha eme nyocha ụbọchị ha.
Maka ntinye ikpeazụ, iAcquire jụrụ ndị na-ahụ maka ịntanetị gbasara otu ha si eji soshal midia eme kwa ụbọchị. Azịza ha gbakọtara enyewo nghọta miri emi. Hụ ihe ị nwere ike ịmụ maka otu ndị ọrụ gị si emekọrịta mmekọrịta.
Tags: iacquireomume mkpanakaomume nyocha igweomume mgbasa ozinyochaa nyochaSurveyMonkey
Mgbasa Mgbasa Mgbasa Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi